Inta badan gaar ah Waxyaabaha la sameeyo In Amsterdam | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Inta badan gaar ah Waxyaabaha la sameeyo In Amsterdam
Haddii aad booqanaysid Amsterdam markii ugu horeysay ama ku soo noqonaya haddana mar kale baadi kanaalada qurux badan, waxaad u baahan doontaa in la ogaado oo ku saabsan wax gaar ah ugu dhex yeeshaan Amsterdam! Haddii aad tahay diyaar u ah inay doondoonaan adventures ka baxsan waddo Damrak ee Amsterdam, liiska this ka dhigi doonaa cararaan si dhab ah sixir!
Inta badan gaar ah Waxyaabaha la sameeyo In Amsterdam: Ku raaxayso Shaaha High In Golaha Yar In Amsterdam
Maxay noqon karaan cuter oo dheeraad ah u gaar ah intii adigoo galabnimo Shaaha ee Amsterdams House Yar? Haa, this hubaal haboon ee wax gaar ah ugu dhex yeeshaan Amsterdam biilka! Oo gurigan aad u yar oo ka mid ah Amsterdam xaafadaha ugu da'da weyn tahay oo kaliya 2 mitir ballaaran. Milkiilaha runtii ku neefsaday nolosha cusub ee guriga hore: guriga mar hoy qoys ka kooban shan! Aamini karin sida in ay ahayd, in uu yahay oo keliya mid ka mid ah sheekooyinka in aad sugi in this tearoom qurxoon.
dabaqa koowaad waa dukaan raaxo yar shaaha, halka dabaq labaad iyo saddexaad diyaar u ah inay kugu soo dhaweynayaa ekayd shaaha maragyo a. Waxaa jira fursado badan quraacda, Alighieri, shaah sare, iyo xitaa qadada. Waxaan ku jiray Golaha Yar laba jeer: mar quraacda u faraxsan in wixii aan ka saac daahay (in aan ahayd maalintii aan ugu fiican), iyo mid kale oo aad u dhowaan, waayo, Shaaha gelinka dambe la ismaris farta, saddex naan kala duwan, iyo scones sidaas dhadhan fiican in marka ay martida u roonaado loo bixiyey inuu qaado wax iska nala, waxaan aan ka waaban. Shaaha ayaa gelinka dambe aan doortay ee ahaa oo ah iibkii 25 EUR qofkiiba, halka Shaaha sare waa 35 EUR.
Inta badan gaar ah Waxyaabaha la sameeyo In Amsterdam: Baadh ISHA Filmmuseum The
Dhammaan dhismayaasha casriga ah ku dhisneyd ee Amsterdam, waa Isha Filmmuseum u taagnayd. Iyada oo ay cayishay, Khadadka dhalaalaysa iskala weheliyaan IJ webiga ka soo horjeeda tareenka. Isha waa on top of waxyaalaha ugu gaar ah inuu ku sameeyo liiska Amsterdam. Its walaac weyn waa shaneemo, dhowr screens bixiya tiro balaadhan oo ah nidaam iyo classic filimada. Waxaa jira, si kastaba ha ahaatee, Waxa kale oo ku meel gaar ah u gaar ah bandhigyo farshaxan iyo hawlo carruurta, oo lagu daray views si gaar ah u wanaagsan back dhinaca bartamaha magaalada. Sidoo kale iska halkan qarsoon, oo soo bandhigay si joogta ah, waa failed filimada ee filimada guridda of Jean Desmet, oo dib taariikhda fog sida 1907. halkan ka qaada qadada, sidoo kale: bar cafe ah waa heerka ugu horeysay.
Baro The Museum Of Dambiisha Oo boorsooyinka
Saddex dabaq labada shandadaha oo qaraami ah oo casri ah, boorsooyinka iyo boorsooyinka Hendrikje Tassenmuseum ka dhigi doontaa sida mid ka mid ah Amsterdam ugu soo jiidashada aan caadi ahayn oo racfaan. Immaculately soo bandhigay guri nagaadi ah oo gaboobay oo qurxoon, warbixinta kooban ee ka mid ah oo gogo 'Art lacagta badan iyo Art Deco, Golaha wasiirrada oo dhan of shandadaha dhif iyo 1950 oo dhalaalaysa oo ah caag adag sameeyey foom heer hoose ah Perspex iyo (anshax sugina) shandadaha guridda Xayawaanka dhigay. bandhigyo ku meel gaar ah oo jawaan oo casri ah iyo boorsooyinka duubaan baxay ururinta.
Poezenboot The (Cat Doon The)
Haddii mid ka mid ah waxyaalaha ugu gaar ah si ay u sameeyaan Amsterdam ka mid ah i hesho in salaaxid xayawaan la jeclaysto, ka dibna waxay igu tiriyaan in! Tag on iyo booqo catboat ee aad loo jecel yahay! Haaa, waxaad ka akhrisan xaq in! In kastoo bisadaha caadi biyo ka fogaanno si kasta, felines ama Poezenboot ah, u muuqdaan kuwo si fiican guriga on meeshoodii quduuska ahayd sabayn. Waxaa meesha quduuska ah xayawaan sabayn on kanaalka ah Amsterdam. Waxaa la aasaasay by Henriette van Weelde in 1966 sida guri wiifto ah, buka, oo ka baxay felines, tan iyo koray galay samafal rasmi ah.
guri dooni The kor u caawinaysa in 50 bisadaha mar, 14 kuwaas oo si joogto ah dadka deegaanka. Kooxda martida Human waa la soo dhaweynayaa on markabka iyo sidoo. Dad badan oo u yimid inuu dooran bisad korsato, laakiin dalxiisayaasha waa lagu soo dhaweynayaa in ay hoos iyo xoqin jeebka dhegaha gadaashooda.
Sida ay tahay hay'ad samafal ah, meesha quduuska ah oo doonnida sii joogo sabbaynaya in deeqaha mahad tagay by visitors. lacagta ka soo kiciyey oo dhan wuxuu tegayaa xagga caawinta bisadaha badan Amsterdam ee suurtogalka. The Cat Doon Foundation bixinaya neutering ee bisadaha kuwaas oo milkiilayaasha aan awoodi karin daryeelka caafimaadka xoolaha, iyo sidoo kale ka dhuntay. Volunteers is ogow of bisadaha ah, qaar ka mid ah kuwaas oo ay qaateen kooxda martida. The bisadaha ayaa la rumeysan yahay dib isugu habayn si nolosha dhulka si fiican guryahooda cusub.
Tag Kalluumaysiga caaga lagu guda A gaar Tour Of Amsterdams kanaalada
Going kalluumaysiga caag ah on the kanaalada Amsterdam waa mid ka mid ah waxyaalaha ugu gaar ah si ay u sameeyaan Amsterdam hubaal! Oo ha iga kuu sheegi, waxaa dhab ahaan u eg yahay waxaa codadka. initiative An bay'adda u wajihi doonta hawl dalxiiska by caaga xuudka, ah 2 saacad doon safar runtii koriyo on labada xiiso leh iyo goobaha picturesque. Marka aad tallaabo doonni fuulay, aad ka hesho net kalluumaysiga u gaar ah, iyo off aad u tagto!
Qaybta ugu wanaagsan ee ay u badan tahay waa in halka tours kale doonnida dhoofo ee la soo dhaafay sida ay wadada Fundka, waxaad ka heli si ay u tagaan meel kasta oo aad garto xoogaa yar oo caag ah. Waxaaba galay kulan tartan rasmi ah aan Spy halkaas oo qof walba waxa uu super maal raadinta xataa gelinno yar ee bacaha balaastikada ah. dabaal A dhabta ah waxay dhacdaa marka qof dhibco dhalo dhow dhinaca kanaalka. Sida sirkaalkii farsamooyinkooda markabka oo ku haboon oo u dhaxeysa doonyaha ku xidheen, aad xagal gacmahaaga iyo triumphantly kalluumaysto shiddoole ka soo baxay! Diyaar u wada hadli jirayba weirdest ee maalinta iyo sidoo kale qosol iyo bond la rakaab kale.
Waxaan qabaa in waayo-aragnimo this si xaqiiqo ah oo qiimihiisu yahay inta aad, iyo waxay bixisaa si aan caadi ahayn in ay la kulmaan ee kannaallada Amsterdam. Waxaad u dhaqaaqi doono badan oo aan daal, oo mar safar ay ka badan tahay, aad sarre u qaadi doonta doonnida ka soo degeen la dareenka guusha iyo sidoo. All in kaliya 25 EUR.
safar The Woonbootmuseum
Hadii aad waligaa yaabay waxa sida ay tahay in ay ku noolaadaan oo ku saabsan mid ka mid ah houseboats Amsterdams, tani waa fursad si aad u ogaatid. On liiska waxyaalaha ugu gaar ah si ay u sameeyaan Amsterdam our, aad sameyn karto oo kaliya in! Milkiilayaasha waa ciyaar saaxiibtinimo oo ay ay guri dooni classic furay, kaas oo la bilaabay in 1914 sida xamuulka ah ee ciid iyo quruurux hor inta aan la badaley 1960. Visitors bedhiyo karaan dhex marayay aagga nool raaxo, halkaas oo cantoobo muggeed oo dabar sharaxaadda hoos u siin hoos on nolosha guri dooni. Milkiilayaasha ma tihid; ku dhowaad 3,000 shaqaalaha saran oo houseboats ku xirnayn galay shabakadaha gaaska iyo korontada Amsterdams. Xiisaha qanacsan, marayso karo wadada ay u aasaaska ah cuntada aad u fiican, Restaurant gorayada.
Inta badan gaar ah Waxyaabaha la sameeyo In Amsterdam: Qaado An Audio Tour Iyada Tuschinski Tiyaatarka
Baro taariikhda ka dambeeya hanqadhka Tuschinski Tiyaatarka. Haddaba shineemo shaqeeya, Tiyaatarka ku Reguliersbreestraat waa qayb ka mid ah group Pathe ah. Aamino gaar ah waa isku dhafan ee Deco farshaxanka iyo lacagta badan tahay. Abuuray on guddiga Tuschinskis by naqshadeeyaha ugu Hijman Luis de Jong. Laakiin sida quruxsan sida Aamino waa, shineemo hall ugu weyn waa masraxa dhab ah oo aan waxba u fiicneyn sida uu soo jiidasho badan waxaa ku jira daawashada filim jecel kursi maro jilicsan cas.
tiyaatarka waxay bixisaa maalin kasta tours audio bilaabatay in inta u dhaxaysa 09:30 iyo 11:30. safar waxaa laga heli karaa labada English iyo Dutch. Waxaa socdaa 45 daqiiqo iyo kharashka 10 taas oo ka mid ah koob shaah ah ama kafee EUR. Dalxiis la hago ayaa waliba loo heli karaa kooxo waaweyn oo ka bilaabanaya 15 dadka. Si aad u ballansan, diri email ah in rondleidingen.tuschinski@pathe.nl.
Haddii aad jeclaan lahayd inay ku raaxaystaan ​​ambiance tiyaatarka, waxaad qaadan kartaa eegno baaritaanka movie qorsheeyay. Waxaa waxaad ka heli doontaa qaab kale website-ka Pathe. Si aad u raaxaysan soo bandhigay in ka meel masrax u qurux badan, Raadi filimada ee Hall Weyn. Mararka qaarkood, waxaa jiri kara riwaayada nool iyo sidoo.
Inta badan gaar ah Waxyaabaha la sameeyo In Amsterdam: Tag On Adventure Room baxsado In Rijksmuseum
Xagaaga of 2018 Rijksmuseum bilaabay waxa loogu tala galay in lagu a koobnayn xagaaga gaar ah ayaa loo. Waxaa hadda waa mid gaar ah a kulan u cararaan experilankan iyo liiska waxyaalaha u gaarka ah ugu dhex yeeshaan Amsterdam iyo meel Amsterdams museum ugu caansan. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay u muuqataa in ka dib guul bilowga ah, doonidiina halkan waa in ay sii joogaan. Khibradda socdaa deeqsi ah 1.5 saacadood oo runtii aad jiidayo hawada. Waxaad xilsaaray soo kabsaday formula ah laga xaday buug qarnigii 18aad by saaxirka Talyaani iyo alchemist Alessandro Cagliostro.
Caalamka The Museum Kaliya u heelan yihiin inay yaabka leh ee Fluorescence
Amsterdam caanka ah Anne Frank House waa mid aad u dhow in museum yar this u huray in arrimaha ka sii psychedelic oo sabab weyn sababta ay mid ka mid ah waxyaalaha ugu gaar ah si ay u sameeyaan Amsterdam!
Leedahay oo ku shaqeeya by faras yar iibsatay lacagihii artist Nick Padalino. Electric Ladyland xaqiiqdii waa on top of waxyaalaha ugu gaar ah inuu ku sameeyo liiska Amsterdam. Waxaa laga heli karaa hoygaaga sidoo kale la odhan jiray wadada tahay heerka gallery, Electric Lady. Electric Ladyland waa dunida ugu horeysay ee (oo u muuqda oo kaliya) museum diiradda keliya sixir iftiinka nalalka dhaadheer.
Ready in ay tagaan safar yar u safray, laakiin oh si ka badan oo xiiso leh? Qabo gaadiid la Save A tareenka! No ajuurada qarsoon, kaliya sahlidda!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Inta badan gaar ah Waxyaabaha la sameeyo In Amsterdam” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-unique-things-amsterdam/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Amsterdam safarka #UniqueAmsterdam travelamsterdam travelnetherlands